Nlekọta Ọha Obodo Mere Ọtọ | Martech Zone
Nchịkwa Obodo mere nke ọma
Thursday, August 29, 2013 Fraịde, Ọgọstụ 30, 2013 Kelsey Cox
Agbanyeghị na ọrụ ha nwere ike ịdị iche na otu ụlọ ọrụ gaa na nke ọzọ, ndị na-elekọta obodo na-abụkarị ndị na-ahụ maka mmụba ndị na-ege ntị na njikọ aka. Mgbe niile dị n'ahịrị iji gboo mkpa na arịrịọ nke ndị ahịa gị, ha na-elekwasị anya na ihe kachasị mma maka ụlọ ọrụ gị: na-enyere aka ijigide ndị agbụrụ obodo, imeri trolls a na-apụghị izere ezere, ma melite nghọta gị.
Ma sorting site posts na ozi, na-ahazi ihe, ma ọ bụ na-atụgharị na-ezighị ezi nzaghachi n'ime mma, obodo oru bụ ndị kacha akwa n'etiti ahịa obodo na gị ika ugg juggling multiple ọrụ na ibu ọrụ ozugbo. N'otu aka, ha na - akpali ndị nkwado ka ha bụrụ ndị mmeri - na - eme ka ha mata ntanetị, ọnọdụ onye njikwa, na ohere ịnweta ozi ụlọ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ha na-achọpụta, nyochaa, ma dozie esemokwu na ọdịda n'etiti ndị otu obodo, na-edebe nzaghachi na-adịghị mma na-emetụta ọdịdị ụlọ ọrụ gị.
Kedu ka ha si emezu ebumnuche obi ike dị otú ahụ? Dabere na Nweta afọ ojuju, idebe obodo siri ike na-esiri anyị ike ma ọ ga-abara ndị a kwadebere nke ọma. Lelee ha onye njikwa obodo na ndu maka ihe ịga nke ọma:
Tags: mmeriNjikwa Obodoonye njikwa obodoNdị ọrụ nlekọta ndị ahịainfographictrolls
Hazie WordPress Jetpack Shortcode Obosara
Obere ntuziaka Nduzi na Social Media Mastery
Aug 30, 2013 na 2: 49 AM
Kedu ihe bụ adreesị tweet gị kelsey ??